Akụkọ - Nlekọta nlekọta anụ ahụ nke mmanụ dị mkpa n’akụkụ dị iche iche nke ahụ
Mmetụta nlekọta anụ ahụ nke mmanụ dị mkpa n'akụkụ dị iche iche nke ahụ
Mmanụ ndị dị mkpa bụ osisi ndị sitere na okooko osisi dị ọcha, akwụkwọ, peels, mkpụrụ, alaka na akụkụ ndị ọzọ, na mkpụrụ osisi aromatic. A na-echekwa njirimara nke osisi dị ọcha n'enweghị ihe mgbakwunye ọ bụla nke agbakwunyere. Ọ nwere mmetụta pụrụ iche na akpụkpọ, ahụ na mkpụrụ obi.
Mkpụrụ molekụla nke mmanụ dị mkpa bụ 1/3000 nke mkpụrụ ndụ ihe ọkụkụ, nke dị 1000 ugboro karịa mkpụrụ ndụ mmadụ. Ọ dị mfe etinye obi gị dum na anụ ahụ. O ruru epidermis na 1 nkeji, dermis na 2 nkeji, yana usoro mgbasa ọbara na minit 10-15. N'otu oge dị ka anụ ahụ, ọ pụkwara ịgwọ akpụkpọ ahụ n'ime.
A na-eji mmanụ dị mkpa na ihu mee ka anụ ahụ dị ọcha ma chọọ mma. Cheta itughari na isi mmanụ tupu itinye ya na ihu. The mma dilution ruru bụ 1-5 tụlee nke dị ezigbo mkpa mmanụ na 5ml (banyere 100 tụlee)
N'ozuzu, a na-ejikarị Roses, okooko osisi oroma na lemọn eme ihe maka ịcha ọcha na mmezi ihu. A na-ejikarị frankinsens na rose eme ihe maka ịka nká. A na-ejikarị cypress na rosemary eme ihe maka astringent na nkwụsi ike; lavender, osisi tii ma ọ bụ geranium ka akwadoro maka mmanu mmanu na nsogbu!
2.Soft agba na isi nke okpokoro isi:
Itinye aka na mpaghara abụọ a nwere ike inye aka gbanwee ọnọdụ na ịhazi mmetụta. (Okpokoro dị nro na-atụkwasị n'elu isi nke ire ma ọ bụ gbatịkwuo mgbatị nke akwara pharyngeal palatine na akwara ndị ọzọ. Ọ bụ akụkụ nke anụ ahụ nke na-ekewa oghere ọnụ na pharynx, yabụ na ọ nwere ọrụ nke ikewapu sistem iku ume site na sistemu nri nri. Nkpuru ala nke akpukpo ahu (Nke anakpo isi okpokoro isi, nke bu ihe di nkpa banyere ahu ike)
Akwadoro ka ị jiri frankincense, sandalwood, patchouli na myrrh.
3.Neck, ọkpọiso na ụlọ arụsị:
Mgbe esemokwu dị n'isi na n'olu, itinye mmanụ dị mkpa n'akụkụ atọ a nwere ike inye aka belata ya!
A na-atụ aro ka ị jiri lavender, mint na frankincense!
Itinye mmanụ dị mkpa n’igbe nwere ike ịkwalite ọghọm nke ikuku ahụ ma nyere aka mee ka ahụ dị ọcha, dịkwa ọcha!
Na-atụ aro mmanụ ndị a na-ejikarị eme ihe: Eucalyptus na rosemary, na-eku ume nke ọma!
Tinye mmanu di nkpa na afo, karia ihe ndi na eme nri, iji nyere aka na-agbari nri ma gbochie obi erughị ala oge.
A na-atụ aro ka ị jiri mmanụ dị mkpa nke ginger, coriander, fennel na-atọ ụtọ na ose ojii.
6. na-efegharị efegharị:
Tinye mmanu di nkpa na imeju imeju iji nyere aka ichota ma mee ka ocha ma kwado oru di ocha nke aru.
Akwadoro ka ị jiri lemon, mkpụrụ osisi grepu, geranium na junipa.
7. Ogwe aka, ụkwụ na azụ:
Iji mmanu dị mkpa ịhịa aka, nkwojiaka, ụkwụ, azụ na ọbụ ụkwụ nwere ike inye aka belata akwara ike na akwara ike gwụrụ ma na-egbu mgbu, ma kwalite mgbasa ọbara.
Akwadoro ka iji ahihia ahihia, lemongrass, na cypress.
Itinye aka na ụkwụ nwere ike ịkwalite ngwa ngwa nke mmanụ dị mkpa, n'ihi na oghere ndị dị na ụkwụ dị mfe ịmịkọrọ, nke bụ ahụike, nchekwa ma dị mfe iji nweta mmanụ dị mkpa. A na-ewerekarị ụkwụ ụkwụ dị ka njikọ dị n'etiti akụkụ dị iche iche na akụkụ ahụ. E nwere ọtụtụ akụkụ a na-akpọ mpiaji ebe. Ọtụtụ mgbe na-akpali akụkụ nke mpiaji ha nhata ime na akụkụ ma ọ bụ akụkụ ndị kwekọrọ. Ọ dịghị mfe icheta mpaghara ntụgharị uche ọ bụla, gbanye mmanụ dị mkpa n'obo ụkwụ dum!
Akwadoro ka iji obi jụụ, frankincense, vetiver, ylang ylang
Post oge: Ọkt-13-2020